Dhismaha Garoonka Cusub ee Kubada Cagta MO FARAH Stadium oo U Dumay Dhaqaale Yari….Axmed Mahamed Bookh (isha) |
Dhismaha Garoonka Cusub ee Kubada Cagta MO FARAH Stadium oo U Dumay Dhaqaale Yari….Axmed Mahamed Bookh (isha)
Waxaan marka hore u mahadnaqayaa dhamaan akhristayaasha shabakada wararka ee Gabiley News, waxaan maqaalkan ku eegii doonaa bal inaan wax idiin ka taataabto aragtidayda sababta keentay inuu dumo Garoonkii Cusbaa ee loogu magac daray orodyahankii waynaa ee u orda dalka Ingiriiska oo kasoo jeeda gobolka Gabiley.
Anigu waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa sadex arimood oo aan isleeyahay waa kuwa ubucda u ah inuu mudo sanad iyo badh ah taagnaado oo uu dumo dhismaha garoonkaasi.
Mar Koobaad, Aragtidayda kooban waxaan isleeyahay waxaa ugu wacan: Ujeedo la’aanta haayada dhaqaalaha bixinaysay, Dawlada Hoose oo lunsatay dhaqaalihii loo qoondeeyay iyo aqoon darrada qandaraaslaha.
Marlabaad, Haayada UN-HAPITAT oo mashruucan intiisa badan dhaqaalaha bixinaysa ayaa gabtay doorkii ay ku lahayd oo Ahaa inay dhismaha garoonka ku samayso kormeer joogto ah Sobobtoo ah ujeedada laga lahaa dhismaha garoonka ayaan muhiimad badan u lahayn haayadaasi marka laga reebo dhaqaalaha oo ka mid ahaa dhaqaale badan oo haayadu ku bixinaysay mashaariic Gabiley laga fuliyo oo dib u dhacay, mashruucan dhismaha garoonkuna ahaa mid wakhti danbe soo baxay oo ka gaadhsiis uun ahaa.
Mar Sadexaad, Dhaqaalaha Dawlada Hoose u qoondaysay dhismaha garoonka oo aan loo sii dayn qandaraaslaha taasi oo keentay in garoonkii aanu ku dhamaan mudadii heshiiska lagu kala qaatay, kolkaasi oo qandaraaslihiina joojiyay dhismihii garoonka ee socday maadaama miisaaniyadii dhaqaaluhu ugu jiray ay ahayd tii 2015 kii oo wakhtigu ka dhacay. Dawlada Hoose na dhaqaalihii u isticmaashay meelo kale oo aan la garanayn.
Arinta kale ee aan isleeyahay way keentay inuu garoonkaasi dumo ayaa la odhan karaa inay tahay farsamo xumo iyo aqoon darro ka timid injineerka qandaraaska la siiyey oo ay qaraabo yihiin qaar ka mid ah masuuliyiinta Dawlada Hoose ee Gabiley, taasi oo keentay in markii garoonku dumay lala xisaabtami kari waayay qandaraaslihii oo gebi ahaanba faraha ka qaaday dhismihii garoonka.
Qandaraaska dhismaha garoonkan oo marka hore ay ahayd in warbaahinta lagu xayaysiiyo oo qandaraaslayaasha soo codsada ka ugu awooda iyo kartida badan la siiyo ayaan lagu tartamin islamrkana si qarsoodiya loo siiyey injineerka qandaraaska la siiyey.
Dayrka sare ee dhismaha garoonka dhinaca Loogu Talo Galay inuu fadhiisto taarabuunku ayaa laga tagay tiirarkii xajinayay kaabadaha Loogu talo galay inay Fadhiistaan dadku taasina ay keenay in roobabkii da’ay ay ka hoos saaraan camuudii seeska looga dhigay kadibna uu dumo dayrkoo dhami. Arintani waxaa la isku qabsaday inaanay ku jirin qandaraaska sababta looga reebayna la sheegay in ay tahay markii ugu horaysay ee injineerkani dhiso garoon kubadeed. Taasi oo noqonaysa sabab macquul in dhismihii garoonku u istaago dhaqaale la’aan.
Dhismaha garoonkan oo wasaarada ciyaaraha iyo ciyaartoyga gobolku ahaayeen daneeyayaasha ugu horeeya ee garoonku khuseeyo ayaan gebi ahaanba laga qayb galin talada lagu qorshaynayay dhismihiisa taasi oo keentay inaanay dareemin ba ciyaartoyda iyo wasaaradu in garoon ka dumay iyo in kale.
Guntii iyo gabagabadii waxaan aragtidayda kusoo af-meeri lahaa, in dadka reer Gabiley ee gudo iyo dibad ba joogaa loo gurmado dhamaystirka dhismaha garoonka kubada cagta ee MO-FARAH STADIUM oo u taagan dhaqaale la,aan iyo karti darro.
Qalinkii: Ahmed Mohamed Bookh (Isha)